Butaan ama Boqortooyada Butaan waa wadan Dhul xiran oo ku yaalo koonfurta Aasiya Bhutan (/ buːtɑːn /; འབྲུག་ ཡུལ་ Druk Yul), si rasmi ah Boqortooyada Bhutan (འབྲུག་ རྒྱལ་ཁཁབ་ Druk Gyal Khap),  waa waddan baddan oo ku yaal Koonfurta Aasiya. Waxay ku taallaa dhinaca waqooyiga bari ee waqooyiga, gobolka Sikkim ee Hindiya iyo dooxada Chumbi ee Tibet ee galbeedka, gobolka Arunachal Pradesh ee bariga Hindiya, iyo dalalka Assam iyo West Bengal ee koonfurta. Bhutan waa joqraafi ahaan Koonfurta Aasiya waana gobolka labaad ee ugu tirada badan gobolka ka dib Maldives. Thimphu waa caasimadeeda iyo magaalada ugu weyn, halka Phuntsholing waa xarunta dhaqaalaha.
Koonfurta Aasiya, Bhutan ayaa markii ugu horreysay ku jirta xorriyadda dhaqaalaha, fududaynta ganacsiga, iyo nabadda; labaad ee dakhliga qofkiiba; waana waddanka ugu musuqmaasuqa badan ilaa 2016. Si kastaba ha noqotee, Bhutan ayaa weli ah waddanka ugu horumarsan. Hydroelectricity waxay xisaabisaa saamiga ugu badan ee dhoofinta.  Dawladdu waa dimuqraadiyad baarlamaani ah; Madaxa dawladda waa Boqorka Bhutan, oo loo yaqaan 'Dragon King'. Bhutan waxay xiriirka diblomaasiyadeed la leedahay 52 waddan iyo Midowga Yurub, laakiin xiriir toos ah kuma laha shan ka mid ah xubnaha joogtada ah ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Waa xubin ka mid ah Qaramada Midoobay, SAARC, BIMSTEC iyo dhaqdhaqaaqa aan ku haboonayn. Ciidammada Bhutan waxay ku sii jirayaan xiriir xooggan oo ciidamada militariga ah la leh ciidamada Hindiya.
Vista de Thimphu.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Butaan&oldid=179767"
Last edited on 6 Sebteembar 2018, at 11:59
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Sebteembar 2018, marka ee eheed 11:59.